एप्पल आईओएस 7.1.2 शुरू आईफोन समाचार
एप्पल आईओएस 7.1.2 जारी
एक सम्भाव्य को अफवाहहरु iOS १ release रिलीज एप्पल द्वारा आधिकारिक रूपमा पुष्टि गरिएको छ। कम्पनीले भर्खर आईफोन, आईपड टच र आईप्याडका लागि प्रयोगकर्ता समुदायमा नयाँ सफ्टवेयर अपडेट जारी गरेको छ। अपडेट आईट्यून्समा उपलब्ध छ तर तपाईं यसलाई सिधा तपाईंको उपकरणमा डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ ओटीए मार्फत (सेटिंग्स-सफ्टवेयर अपडेट विकल्प भित्र)। यदि तपाईं यो दोस्रो विकल्पको लागि अप्ट गर्नुहुन्छ, फाइल आकार on० र MB२ MB बीचमा भिन्न हुनेछ। यदि तपाईं यसलाई आइट्यून्सको माध्यमबाट डाउनलोड गर्नुहुन्छ, तब तपाईं १ जीबी भन्दा ठूलो फाईल फेला पार्नुहुनेछ।
यो सूची हो iOS 7.1.2 भन्दा सुधार प्रदान गर्दछ:
IBeacon जडान र स्थिरता सुधार गर्दछ।
बारकोड स्क्यानर सहित, तेस्रो पक्षका सामानहरू मार्फत डाटा ट्रान्सफरको साथ बग फिक्स गर्दछ।
ईमेल संलग्नकको साथ एक सुरक्षा मुद्दा ठेगाना।
यस भर्खरको कमजोरी केही हप्ता अघि सुरक्षा विज्ञ र द्वारा उजागर गरिएको थियो एप्पलले विफलता स्वीकार्यो प्रयोगकर्ताको ईमेलमा एट्याच्मेन्टहरू एन्क्रिप्ट नगरी। यो अब आईओएस .7.1.2.१.२ बाट देखा पर्ने छैन, एक अद्यावधिक जुन तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ, सानो छ।
साना बगहरू सच्याउन र अपरेटि system प्रणालीको स्थिरता सुधार गर्न यो आवश्यक संस्करण हो, तर हामी विश्वास गर्दैनौं कि एप्पलले आईओएस of को अर्को संस्करण सुरू गर्नेछ, किनकि कम्पनी यसमा सामेल छ, एक सय प्रतिशत, आईओएस development विकास (तेस्रो बिटाले यस हप्ता विकासकर्ता समुदाय बीचमा प्रकाश देख्नुपर्दछ)।
लेखको पूर्ण मार्ग: आईफोन समाचार » आईओएस » iOS7» एप्पल आईओएस 7.1.2 जारी
के तपाइँलाई थाहा छ यदि यो अझै आईओएस .7.1.1.१.१ जेलब्रेकको लागि कमजोर छ?
म पुष्टि गर्छु कि ios .7.1.2.१.२ मा pangu १.१.० को अलिखित पठनीय काम गर्दछ
मसँग हाल 7.0.4.०.? जेलब्रेक छ, के यो पछिल्लोमा जान र पुनः जेलमा बस्नु उचित छ वा म जस्तो गरी रहन्छु?
यदि यो ट्वीक्सको लागि लायक छ जुन पछि बाहिर आउँदछ, हुनसक्छ तिनीहरू compatible.०..7.0.4 को साथ उपयुक्त छैन र स्थिरता धेरै राम्रो छ, तपाईं हेर्नुहोस्, तर .7.04.०XNUMX लगभग मेरो लागि एक कमबख्त बिटा जस्तै छ, औंक हालसालै म धेरै मूर्ख हुनुहुन्न
नमस्कार ओलेओल, मैले 7.0.4.०..7.1.1 मा जेलब्रेक गरे, म 5.१.१ मा अपडेट भयो र मैले एकदम महत्त्वपूर्ण परिवर्तन देखेको छु .. यो छिटो जान्छ, अनुप्रयोगहरू बढी फ्लाउड… मसँग आईफोन have छ।म अपडेट गर्न सिफारिस गर्दछु।
Gagra2 लाई जवाफ दिनुहोस्
मेरो आईफोन अपडेटको बखत लटका छ…।
Watta लाई जवाफ दिनुहोस्
नमस्ते वट्टा, मसँग आईफोन5छ र यसले ममा झुण्ड्याएको छ…। के तपाईंले यसलाई समाधान गर्न प्रबन्ध गर्नुभयो?
यो मलाई आईओएस .7.1.2.१.२ मा अद्यावधिक गर्न कोडको लागि सोधे, के तपाईंलाई थाहा छ यो के हो?
राउलसेन्डालाई जवाफ दिनुहोस्
भर्खर तपाईको लक कोड राख्नुहोस्।
Sandrix लाई जवाफ दिनुहोस्
आईफोन अपडेट गरियो .4.१.२ ठीक छ। पांगु १.१.० को साथ जेलब्रेक ठीक छ, टिकट SAM ठीक छ,
त्यहाँ तिनीहरूलाई अफिस २ एड्ड चाहिन्छ तर आईओएस for का लागि परिमार्जन गरिएको संस्करणहरू स्थापना गर्न चाहनुहुन्न, सौरिकले एप्पल फाईल कन्ड्युट "२" भन्ने एक्सटेन्सन जारी गर्‍यो जुन एउटै उद्देश्यलाई अफसी २ ए डी डीमा काम गर्दछ।
मलाई अलि समस्या छ, यदि तपाईंले मलाई मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ भने।
मैले बेलायतमा eBay बाट एक आईफोन bought किनेको छ, imei द्वारा यसलाई अनलक गर्न भुक्तान गरिएको छ तर यो अनलक भएको छैन। मैले imei कालोसूचीमा थियो कि भनेर हेर्न भुक्तान गरें र मेरो आश्चर्य यो कि त्यो सूचीमा छ।
मसँग आईओएस .7.1.1.१.१ छ
मैले pangu jalibreak गरेको छु, मैले आईफोन अनलक गर्न SAM डाउनलोड गरें तर म सक्षम छैन, केहि मबाट उम्कन्छु।
जोएल ११13 भन्यो
मलाई पनि त्यस्तै भयो। पनगुलाई जेलब्रेकिंग पछि s एसमा र एसएएम स्थापना गरेपछि, म यसलाई अनलक गर्न सक्षम भएकी छैन।
के कोहीसँग यस समस्याको समाधान छ? वा ios 7.1.2 संग उपयुक्त छैन?
जोएल ११13 लाई जवाफ दिनुहोस्
राउलसेन्डा तपाईको आईफोनको लागि अनलक कोड हो
माफ गर्नुहोला तपाई साथी हुनुहुन्छ
Mit लाई जवाफ दिनुहोस्
मेरो आईफोन S एस पनि अपडेटको बेलामा झुण्डियो। कसरी समाधान गर्ने?
Jafy लाई जवाफ दिनुहोस्
नमस्कार, पावर बटन र होम बटन थिच्नुहोस् र समस्या समाधान भयो
Valenciadanyela लाई जवाफ दिनुहोस्
मेरो आईफोन c सी र मेरो आईप्याड मात्र ह्या hung्ग अपमा छन्, समाधान के हो?
यदि तपाईं स्थिर गरिएको छ भने होम र अन प्रेस गर्नुहोस् र समस्या समाधान भयो। तर मलाई लाग्छ कि यो अपडेटको असफलता हो।
धन्यवाद जुआन, आईप्याड २ देखि १/2 स्थिर थियो र यसले होम र पावर प्रेस गर्न काम गर्‍यो।
धन्यवाद!!! यो मेरो लागि एकदम राम्रो काम भयो
मालवाराडोकोरलाई जवाफ दिनुहोस्
उत्कृष्ट जुआन, धेरै धन्यबाद तपाईले मलाई बचाउनु भयो
Landi लाई जवाफ दिनुहोस्
धेरै धन्यवाद जुआन! यस्तो देखिन्छ कि यो जीवनमा फिर्ता आउँदैछ ... यद्यपि म सप्पल स्क्रिनको साथ जारी राख्दै छु ... र अब के ...? के तपाईं .7.1.2.१.२ स्थापना गर्न जाँदै हुनुहुन्छ ...? वा राम्रो यो छोड्नुहोस्?
जुआन तपाई उत्कृष्ट हुनुहुन्छ !!!!!!!!!
जोहानलाई जवाफ दिनुहोस्
एलेक्सिस अना रिकार्डि लोपेज भन्यो
जुआन, राम्रो माफ गर्नुहोस्, होम बटन के हो?
Alexis Ana Ricciardi Lopez लाई जवाफ दिनुहोस्
एलेक्सिस तपाईंको स्क्रिनको तल एक हो, र पावर बटन माथिको एक हो, तपाईं तिनीहरूलाई केहि समयको लागि थिच्नुहोस् र जब स्याउ फेरि देखा पर्दछ, तपाईं तिनीहरूलाई छोड्नुहुन्छ।
अद्यावधिकको समयमा तिनीहरू झुण्डिए भनेर भन्छन्, उनीहरूसँग पहिले जेलब्रेक छ? किनभने यदि त्यसो हो भने, मलाई लाग्छ कि यो पूर्वावस्थामा ल्याउनु पर्छ र अपडेट गर्नु हुँदैन।
उही जुआन, धेरै धेरै धन्यबाद, आईफोन my अपडेटको १/5 मा मेरो केसमा स्थिर गरिएको थियो र यसले होम र अन प्रेस गर्दा काम गरेको छ।
एएसक भनेको के छ तपाई आईप्सडब् डाउनलोड गर्नुहोस् र यसलाई पुन: भण्डार गर्न र अपडेट गर्न दिनुहोस् यदि तपाईं सिधा अपडेट गर्नुभयो भने तपाईं ह्या hanging्गिंग छोड्नुहुनेछ।
मैले अपडेट गर्न सुरु गरें र यो मलाई टिकियो, म घर र इन्सेन्सिडो थिच्दछु उनीहरू भन्छु र केहि पनि छैन… .. म के गर्न सक्छु ???? यदि मैले ब्याट्री हटाएँ भने के हुन्छ?
अगस्टिन, तपाईले के गर्नुपर्दछ होम होल्ड गर्नुहोस् र १० सेकेन्डको लागि, फोन बन्द हुनेछ, तपाईले त्यसलाई समातिरहनुहोस् जबसम्म सेब देखा पर्दैन र भोईला।
धन्यवाद जुआन, समस्या समाधान भयो, जबकि स्क्रिन स्थापना द्वारा ब्लक गरिएको थियो, यो अनुत्तरित कल र सन्देशहरू पंजीकृत गरिएको छ। अभिवादन
धेरै धेरै जुआनलाई धन्यबाद, मेरो पहिले नै अपलोड गरिएको छ…।
सिन्थ्यालाई जवाफ दिनुहोस्
यसले मलाई यसलाई आईट्युनेससँग जोड्नुहोस् भनेर म भन्छु र यो प्राप्त गर्दैन ... म के गर्ने?
यो मसँग त्यस्तै भयो जस्तो तिनीहरूले तपाईंलाई जवाफ दिए? तपाईं यसलाई समाधान गर्न सक्नुहुन्छ? धन्यबाद। स्यान्टियागो
आईभरलाई पीसीमा जडान गर्नुहोस्, आईटोनहरू खोल्नुहोस् र आईफोनमा एकै समयमा and० सेकेन्डको लागि घर र पावर बटनहरू थिच्नुहोस् र त्यसपछि मात्र पावर रिलीज गर्नुहोस् र मात्र थिचेको घर छोड्नुहोस् जबसम्म आईट्यून्सले तपाईंलाई आईफोन पत्ता लगाउन नसकेको बताउँदछ। रिकभरी मोड
आईसीफोनलाई पीसी खोल्नुहोस् र आईटोन जडान गर्नुहोस् र उही समयमा प्रेस शक्ति र घर प्रेस गर्नुहोस् र power० सेकेन्ड पछि पावर रिलिज गर्नुहोस् र थिचेको घर छोड्नुहोस् जबसम्म आईट्युन्सले तपाईंलाई आईफोन रिकभरी मोडमा नभएको बताउँदछ।
म आईफोन on मा .7.1.2.१.२ अपडेटको साथ समान समस्या भएको थियो, मैले just० सेकेन्डको लागि पावर बटन र घर थिचेको थिएँ र त्यसपछि मैले पावर बटन छोडिदियो र घरमा थिचिरहें, छोड्नुहोस् र यो बन्द भयो, केही मिनेट यस प्रतीक्षा पछि। र उही प्रक्रिया गर्नुहोस् र यो सफलतापूर्वक अपडेट भयो, शुभकामना
नमस्कार, एक घण्टा भन्दा पहिले मैले .१.२ अपडेटलाई मेरो आईप्याडमा स्वीकारें र यो स्थिर भयो, स्याउ देखियो र तल लाइन बिचमा छ, मैले आइट्यून्स पनि प्रविष्ट गरें र यसले मलाई आईप्याडमा कोड राख्न भन्यो तर म सक्दिन, के तिमी मलाई सहयोग गर्न सक्छौ?
मैले हिजो नयाँ सफ्टवेयर डाउनलोड गर्न सुरु गरें र आज यो तपाईले भर्खरै बनाउनु भएको वर्णन जस्तै हो ... म के गर्ने?
मेरो आईफोन पनि टाँसियो, तर मेरो होम बटनले काम गर्दैन, इग्निशन मात्र, म के गर्न सक्छु? ब्याट्री रन आउट हुन को लागी प्रतीक्षा?
म iTunes बाट अपडेट गर्न वा पुन: भण्डारण गर्न सक्दिन, मैले त्रुटि पाउँदछु
मैले DFU बाट यो प्राप्त गरिसकेको छु र मसँग पहिले नै जेल सिद्ध सिडिया लगाइएको छ !!!
रेमी मौरिसियो मेजिया भन्यो
मैले मेरो आईफोन S एस अपडेट गरें र सबै चीज छिटो पौडिन्छ। म अपडेट सिफारिस गर्दछु किनकि मेरो आईफोन पहिले नै राम्रोसँग चिप्लिएको थियो र अब यो सुपर फ्लुइड हो।
रेमी मौरिसियो मेजियालाई जवाफ दिनुहोस्
मेरो आईफोन half आधा लोडमा अपडेट हुन रोकिएको छ र पावर बटनले लामो समयको लागि काम गरिरहेको छैन ... मद्दत!
एफ्रोडाइटलाई जवाफ दिनुहोस्
जोसँग आईफोन red रेड्सनाका साथ छन् त्यहाँ एउटा सेक्शन छ जुन आईफस्वा सिर्जना गर्दछ जुन डिफुको आईफोन ड्वाजा गर्दछ कि त्यहाँ एक मात्र समाधान छ कि त्यहाँ आईफोन मात्र छ 4
मलाई पनि त्यस्तै हुन्छ। मेरो आईफोन S एस अपडेटको लागि अड्किएको छ र पावर बटनले काम गर्दैन। म के गरौ?!?!
सम्बन्धितलाई जवाफ दिनुहोस्
जुलियट .87 भन्यो
मलाई पनि त्यस्तै भयो, के तपाईं यसलाई हल गर्न सक्नुहुन्छ?
Julieta87 लाई जवाफ दिनुहोस्
मेरो आईफोन the अपडेटको बीचमा अड्किएको छ, मैले यसलाई दुई घण्टाको लागि छोडिदिएको छ तर केही छैन, यसले प्रतिक्रिया दिदैन। मैले ब्याट्री बिच्छेदन गरेको छु र केहि छैन, मैले यसलाई आइट्युनमा जडान गरेको छु तर यसले यसलाई चिनेन। मैले button० सेकेन्डको लागि पावर बटन र होम बटन थिचेर यो पुन: प्राप्ति मोडमा गयो। जब sw पुन: संग्रहित गर्दा यसले मलाई असफलता दिन्छ, त्रुटि २१, र म त्यसलाई फिर्ता लिन सक्दिन। मैले १० पटक प्रयास गरेको छु, मैले फेरि ब्याट्री खसालेको छु, तर केहि पनि छैन। कुनै विचारहरु?
Gon लाई जवाफ दिनुहोस्
Gon यदि तपाईंले १० सेकेन्ड भन्दा बढी समयसम्म बटन समात्नुभयो र पावर बटन छोड्नुभयो र केवल घर छोड्नुभयो भने, यो रिकभरी मोडमा जान्छ। अब तपाईले के गर्नु पर्छ उही प्रक्रिया चलाएर दुबै बटन थिच्नुहोस् र जब सेब देखा पर्छ, तपाईले त्यसलाई छोड्नुहुनेछ र त्यस्तै भयो।
क्यारोलिना Mtz भन्यो
मेरो आईफोन stuck स्थिर रहन्छ जब म यसलाई अपडेट गर्दछु, यदि म मेरो पावर बटनले काम नगरे म कसरी यसलाई ठीक गर्न सक्छु? कृपया सहयोग गर्नुहोस्! धन्यबाद 🙂
क्यारोलिना Mtz लाई जवाफ दिनुहोस्
मेरो आईफोन also पनि अपडेट पछाडि अड्किए, मैले घर र पावर बटन थिचे र यो कम्पोज गरिएको थियो तर स्क्रिन "झिमझिम" जस्तो थियो, यो किन हो? यसको समाधान छ?
यरान्यलाई जवाफ दिनुहोस्
हो, त्यसो हुन्छ किनकि अपडेट राम्रोसँग प्रदर्शन गरिएको थिएन। तपाईं के गर्न सक्नुहुन्छ आईट्यून्ससँग जोड्नुहोस् र यसलाई पुनः भण्डार गर्नुहोस्। र यो समाधान हुनेछ। अभिवादन
नमस्कार, मैले मेरो आईफोन ating लाई अपडेट गर्दै थिएँ र यसले बारमा काम गर्दछु जुन स्याउको मुनि आउँछ र त्यसपछि सेबको साथमा यही पट्टी फेरि देखा पर्‍यो र फेरि पूर्ण हुन थाल्‍यो, जब सम्म यो पट्टीको आधा भन्दा कम नहोउन् र यो अडियो। आधा घण्टा भन्दा पहिले समस्या यो छ कि मेरो गलत होम बटन छ, त्यसैले मँ तपाईले भनेको कुरा गर्न सक्दिन।
मैले यसलाई पीसीमा जडान गरेको छु र आईट्यून्सले यसलाई आईओएस .7.1.2.१.२ को साथ मान्यता दिन्छ, तर बारमा जहाँ उपकरणको पूर्णता आउँदछ, अर्कोले भन्छ, म संगीत, वा फोटो वा केहि पनि पाउँदिन।
म यो कसरी बन्द गर्न सक्दछु र iTunes बाट खोल्न?
Jorge1091 लाई जवाफ दिनुहोस्
अब म यसलाई समाधान गर्न सक्दछु, हाहाहा मैले चार्जर प्रयोग गरेर भित्रबाट होम बटन थिच्नुहोस् र यसरी पुनः सुरु गर्न सक्षम हुनुहोस्। सुझावहरूको लागि धन्यवाद!
तिनीहरूले मलाई बचाए, मसँग फोन अद्यावधिक नगरीकन थियो, मैले घर थिच्नु पर्‍यो र (मैले यसलाई थिचेर राखें) र यो हिड्‍यो। धन्यवाद
तिनीहरू स्थिर छन् किनकि तपाईंले यसलाई उपकरणको माध्यमबाट अपडेट गर्नुभयो यसलाई पहिले Cydia हटाउँदै बिना नै यो अभिवादन हुन्छ
मेरो फोन कहिल्यै जेलब्रोकन वा जेलब्रोकन भएको छैन र अझै स्थिर छ। यो अपडेट फाईलमा त्रुटि हो!
शुभ बेलुका जुआन, मैले मेरो आईफोन on मा अपडेट विकल्प पाएँ, र जब म समान सेल फोनबाट यसलाई अपडेट गर्दछु, यसले मलाई अपडेट प्रमाणित गर्न भन्छ, यो अपडेट सुरु गर्न पुनः सुरु हुन्छ र एप्पल बाहिर आउने बित्तिकै, यसले मलाई सोध्छ। यसलाई आइट्यून्समा जडान गर्नुहोस्, त्यो सरल छ, समस्या त्यो हो; आईट्यून्समा मसँग कुनै प्रकारको प्रतिलिपि छैन किनकि मेरो पीसी बिग्रिएको छ र म यसलाई ल्यापटपबाट गर्दैछु। प्रश्न: म कसरी यो आईएसओएसलाई पुन: भण्डारण बिना पुन: प्राप्ति गर्न सक्छु, त्यो हो, मैले पहिल्यै जानकारी खोत बिना नै (सम्पर्कहरू, फोटोहरू, संगीत, आदि), मसँग महत्त्वपूर्ण कागजातहरू छन् र म पुनः भण्डार गर्न सक्दिन। मैले पहिले नै रिकभरी मोड गरिसकें तर यसको कुनै मतलब छैन किनभने यसले मलाई पुन: संग्रह गर्न पठाउँदछ, अपडेट गर्दैन।
खैर, यो मूल सफ्टवेयर हो, जेलब्रेक बिना!
स्यान्टियागोले यसलाई धेरै चोटि गर्न को लागी कोशिश गर्दछ, १० वा थोरै सेकेन्डको लागि पावर बटन र मेनू बटन थिच्दै। उसले चौथो पटक मलाई जवाफ दिए।
मैले आईओएस .7.1.2.१.२ संस्करण अपडेट गर्‍यो र बार १/ advance अग्रिममा स्थिर थियो। मैले करीव आधा घण्टाको लागि यसलाई छोडे। घर र शक्ति र voila प्रेस गर्नुहोस् !!! यो पहिले नै अपडेट गरिएको नयाँ संस्करणको साथ सकियो। सत्य अपडेटमा यस विफलता बारे एप्पललाई चेतावनी दिनु पर्छ। ताकि यी डरहरु हामीलाई हिट छैन।
Titoelo लाई जवाफ दिनुहोस्
कार्लोस आर्टुरो भन्यो
मलाई पनि त्यस्तै भयो, अपडेट सुरुमा राम्रोसँग गरियो, बारसँगै स्याउ जुन केही मिनेट पछि समाप्त भयो, त्यसपछि उनी फेरि यही प्रक्रिया गर्छिन् र बारको बीचमा रहिन् र कुनै अगाडी बढिन्। डर ठूलो थियो !!! मैले घर र पावर कुञ्जी एकै समयमा थिच्नु पर्दछ जब सम्म यो बन्द हुँदैन। यसलाई फेरि खोल्न मलाई धेरै समय लाग्यो, मलाई थाहा छैन यदि यो निराशा हो जसले मलाई सही कुरा गर्न दिदैन किनकि मलाई लाग्छ मेरो फोनमा केहि खराब भएको छ ... तर सबै ठीक छ र भने अद्यावधिक भयो यो राम्रो देखिन्छ ... !!!
कार्लोस आर्टुरोलाई जवाफ दिनुहोस्
डेभिड कास्ट्रो भन्यो
नमस्ते, बाहिर जान्छ कि मसँग updated एस छ जुन मैले यसलाई अपडेट गरें र जब मैले स्थापना समाप्त गरें भने मलाई त्रुटि भयो र आईफोन USBको साथ आईट्युन्स आइकनमा फसे, म के गर्ने? मलाई यसको मर्मत कसरी गर्ने भनेर थाहा छैन, मैले १० सेकेन्ड र पहिले नै प्रयास गरें
डेभिड कास्ट्रोलाई जवाफ दिनुहोस्
मेरो समस्या समान छ, तर यसले स्थापना पनि शुरू गरेन, यो "प्रमाणिकरण अद्यावधिक" को साथ शुरू भयो र त्यसपछि यो बन्द भयो र अब म केवल युट्युबको साथ आईट्यून्स आइकन देख्छु, यसले मात्र मलाई यो खोल्न दिदैन, मात्र विकल्प आईट्यून्सले मलाई यो कारखानाबाट पुन: भण्डार गर्न हो र म यो गर्न सक्दिन किनभने मसँग जानकारीको प्रतिलिपि छैन, यो खाली हुनेछ। यदि तपाइँ समस्या समाधान गर्नुहुन्छ भने मलाई जानकारी दिनुहोस् र यसको विपरित यहाँ गर्नुहोस्।
एडुआर्डो, फेरि पुन: सुरु गर्न प्रयास गर्नुहोस्, टर्मिनल पूर्ण रूपमा बन्द नभएसम्म १० वा सेकेन्डका लागि दुबै बटनहरू थिच्नुहोस्, दुबै बटन रिलीज नगर्नुहोस् र जब सेब बाहिर आउँदछ, दुबै छोड्नुहोस्। तपाईको फोनले रिकभरी मोडमा प्रवेश गरेको छ जसको आधारमा तपाइँ उल्लेख गर्नुहुन्छ कि केबल र आईट्यून्स प्रतीक स्क्रिनमा देखा पर्दछ। पुन: प्रयास गर्नुहोस् र मलाई थाहा दिनुहोस्
एड्वार्डो, तपाईं यसलाई समाधान गर्न सक्नुहुन्छ? मलाई पनि त्यस्तै समस्या छ। म यसलाई पुनर्स्थापना गर्न सक्दिन किनकि मैले जानकारी गुमाएँ।
मैले यो समाधान गर्न सकिन, के कसैले मलाई मद्दत गर्न सक्छ? !!
सामूलाई जवाफ दिनुहोस्
धेरै धेरै धन्यबाद, मसँग आईफोन jail छ जेलभ्रेक बिना र जब मैले अपडेट गरे यसले यसलाई पहिले पूर्ण गर्यो र फेरि मलाई सोध्यो। दोस्रो पटक उनी आधा बाटोमा रातमा उभिए र कुनै परिवर्तन भएनन्। मैले यसलाई ITunes मा जडान गर्ने प्रयास गरें तर यसले यसलाई राम्रोसँग चिन्न सकेन वा मलाई परिवर्तन गर्न अनुमति दियो। अन्तमा मैले अफ बटन र होम बटन थिचे र यो समाधान भयो।
SARA लाई जवाफ दिनुहोस्
मैविन कुवेस भन्यो
तपाईलाई धेरै नै धन्यवाद, म अपडेसन डाउनलोड गर्दै हान्छु र तपाईंलाई धन्यवाद। मैले समस्या समाधान गरें
मैविन कुवेसलाई जवाफ दिनुहोस्
नमस्कार, के तपाईंले मलाई मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ, मेरो आईफोन s एस आईओएस .4.१.२ को अद्यावधिक भएको बेलामा अडिग भयो। र म यसलाई पुनःसुरु गर्न सक्दिन किनकि मेरो सुरु बटनले काम गर्दैन, म के गर्न सक्छु? मद्दत गर्नुहोस्
धन्यबाद, मैले २ घण्टा सम्म एप्पलको नाकाबन्दीलाई टीबी गर्‍यो र यो अझै पनि त्यस्तै भयो मैले दुई बटनहरू थिच्न काम गरें र त्यसले मलाई डरायो किनभने यसले आईट्यून्ससँग जोड्यो र मसँग अर्डर छैन, मैले दुबै थिचे र खुशी आईट्यून्स बाहिर आयो तर त्यसपछि मैले सामान्य बन्द गरें र मेरो अद्भुत आईफोन on सकृय भयो जब मसँग मसँग अद्यावधिक डाउनलोड गर्ने अर्डर छ किनकि यसले आईफोनमा ठाउँ लिदैन। धन्यवाद
Nica लाई जवाफ दिनुहोस्
अरे अमी अपडेटको बारेमा पनि मलाई त्यस्तै भयो तर समस्या यो हो कि मेरो होम बटनले काम गर्दैन, यो कहिले जेलब्रोन भएको छैन वा केहि पनि छैन, कसले मलाई कसरी मद्दत गर्न सक्छ भन्ने कुरा थाहा छ ??? धन्यवाद
Julianantiago2julianvelilla लाई जवाफ दिनुहोस्
मलाई खराब छ यो लक बटन हो, घर होइन
हेर कि कसैले मलाई मद्दत गर्न सक्छ कि सक्दैनन्। मसँग जेल वा कुनै चीज बिना कारखानाबाट आईफोन s एस छ, म फोनबाट put.१.२ मा अपडेट राख्छु र म एप्पल र बारमा जाँच गर्छु जुन बीचमा पुग्दैन, पावर बटनले मेरो लागि काम गर्दैन। म कसरी समस्या समाधान गर्न सक्छ ताकि फोनले काम गर्दछ, धन्यबाद।
धन्यवाद! मैले मेरो आईफोन बचत गरें पछि यो दोस्रो पट्टीमा पनि आधा भन्दा कममा फ्रिज भयो! मलाई लाग्यो कि मैले यसलाई पुनर्स्थापना गर्नु पर्छ! तर घर र शक्तिले उनीहरूलाई केहि सेकेन्डको लागि थिचेर सबै समाधान भयो।
मलाई पनि त्यस्तै भएको छ र म मेरो आईफोनमा JAILBREAK छैन। तत्काल सिफारिस, अर्को सूचना नभएसम्म भर्खरको ios अपडेट स्थापना नगर्नुहोस्।
Defkon2 लाई जवाफ दिनुहोस्
आईफोन s एस मैले भर्खरै यसलाई अपडेट गरें र टीएमएल एप्पलमा अडिए
नतालियालाई जवाफ दिनुहोस्
एप्पलले तपाईको फोन अपडेट गर्न रोक्ने बारे कुनै सूचना जारी गरेको छैन। यदि स्थापनामा बग छ भने। सबै त्यो फोन एप्पलको दोस्रो उपस्थितिमा स्थिर छ, प्रक्रिया गर्नुहोस् होम + लक गर्नुहोस् वा १० सेकेन्डको लागि सक्रिय गर्नुहोस्, फोन पुन: सुरु हुनेछ, बटनहरू रिलीज नगर्नुहोस् र जब सेब फेरी देखा पर्दछ, तपाईं तिनीहरूलाई रिलीज गर्नुहोस्। चतुर!
जहाँ म .7.1.2.१.२ डाउनलोड गर्दछु
धेरै धन्यवाद जुआन !!! मलाई थाहा छ आईफोन s एस (जेलब्रेक बिना) मँ अपडेट गर्दै थिएँ। स्टीभ जीवित थिए भने यो हुने थिएन। !!!
Kbite लाई जवाफ दिनुहोस्
पाब्लो फ्रान्को भन्यो
मैले नयाँ अपडेट गरे पछि आईट्युन्स आइकन देखा पर्दछ, म के गर्ने ???
पाब्लो फ्रान्कोलाई जवाफ दिनुहोस्
मलाई समस्या छ, मेरो आईफोन सँग बिग्रिएको पावर बटन छ र अपडेट गरिरहँदा यो अड्कियो… म के गर्न सक्छु ???
ईग्रिडलाई जवाफ दिनुहोस्
मलाई मेरो आईप्याडसँग समस्या छ, मैले यसलाई अपडेट गर्दैछु र अचानक यो आधा घण्टा भन्दा बढी चार्ज गरियो, म के गर्न सक्छु ???
ओस् तपाईं प्रेस र होल्ड गर्न को लागी र लगभग 10 सेकेन्ड को लागी हो। स्क्रिन बन्द हुनेछ, तिनीहरूलाई रिलीज नगर्नुहोस् र जब स्याउ फेरी देखा पर्दछ, तपाईं तिनीहरूलाई र भोला रिलीज गर्नुहोस्!
नमस्कार, के तपाईंले मलाई आईफोनलाई संस्करण .7.1.2.१.२ मा अद्यावधिक गर्न मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ तर यो राम्रोसँग अपडेट गरियो तर उपकरणले मेरो पीसीमा मलाई चिन्न सक्दैन!
मसँग उही समस्या छ, जुन मैले आईटुनहरू आइकन राख्छु, मैले पहिले नै दुई पटक धेरै पटक र केही पनि थिचेको छैन, यो यत्तिकै रहन्छ, म के गर्न सक्छु, मेरो कम्प्युटरले यसलाई चिन्न सक्दैन, म अर्कोसँग जडान गर्छु र यसले मलाई भन्दछ कि मैले यसलाई पुनर्स्थापित गर्नुपर्दछ, मसँग भएको जानकारी गुमाउन सक्दिन, म के गर्न सक्छु ???
मार्ता, तपाईं यसलाई समाधान गर्न सक्नुहुन्छ? मसँग समान समस्या छ र मैले जानकारी गुमाउन सक्दिन। म आईफोन पुनर्स्थापना गर्न सक्दिन।
मार्थाले उसलाई पुनःप्राप्त गर्न दिनुहोस् जब यो इट्यूनले सोधे र तयार समाधानको लागि म पनि तपाई जस्तो समस्या भएको थियो
कोडले सोधेको यो अपडेटको लागि कोड हो तपाईंको आईफोनको सुरक्षा कोड हो
कृपया, आईओएस download.१.२ डाउनलोड गर्न तपाईंले प्रविष्ट गर्न सोध्नु भएको कोड के हो? ???
Nelly लाई जवाफ दिनुहोस्
म कसरी गर्न सक्छु मेरो आईफोन s एस आईओएस my.१.२ डाउनलोड गर्ने? यो १ दिन को लागी यस्तो भएको छ र केहि पनि हुँदैन
Jhuve लाई जवाफ दिनुहोस्
मैले अद्यावधिक गरे, यो ममा झुण्डियो र अब यसले मलाई आईट्यून्समा जडान हुन आग्रह गर्दछ ... र यो अझै पछाडि अनलक हुँदैन ... यसलाई फिर्ता लिन म के गर्न सक्छु?
मैले 7.1.2.१.२ मा अपडेट गरें तर अब रियर र फ्रन्ट क्यामेराले काम गर्दैन, मैले पुनर्स्थापना गर्न कोसिस गरें तर यसले त्रुटि फ्याँक्छ, यसलाई हल गर्ने कोही छ?
भेरोनिका (@ भेरोनिक्र्याक) भन्यो
नमस्कार, मसँग आईफोन s एस छ र म आधा भन्दा कममा पनि एप्पल र लाइन तल रहेको भागमा काम गर्दछु। र म पावर बटन र होम बटन को बारेमा के भन्छु म गर्न सक्दिन किनकि मेरो फोनमा पावर बटन खराब छ, कृपया म के गर्न चाहन्छु?
भेरोनिकालाई जवाफ दिनुहोस् (@ भेरोनिक्राक)
मोनिका हार्ट भन्यो
नमस्ते .. कसैलाई कोड थाहा छ ??
मोनिका हार्टलाई जवाफ दिनुहोस्
कोडले तपाईंलाई सोधेको कोड यो हो तपाईंले फोनमा यसलाई रोक्नको लागि। तिनीहरू प्रविष्ट गर्नुपर्नेछ र फोन अपडेट हुनेछ।
नमस्कार मलाई यो भयो कि जब मैले अद्यावधिक स्वीकार गरे, यसले मलाई कोड सोधे, जुन कोडले मैले त्यसलाई राखेको थिए त्यो एउटा हो जुन मैले सेलफोन ब्लक गर्नुपर्‍यो र यसले अपडेट गर्न सुरु गर्यो तर यो बीचमा अडिग भयो। अपडेटको राम्रोसँग मैले यसलाई २ बटन थिचेर समाधान गरें र कोड तपाईको बल्क कोड ग्रीटिंग्स हो
सबैजनालाई हेर्नुहोस् जसले कोडको लागि अपडेटको लागि सोध्दछ, यो सामान्यतया ब्लकि code कोड हो, तर कहिलेकाहिँ मलाई यो भयो, यसलाई कोड अपडेट गर्ने छैन, यसलाई डीएफयूमा राख्नुहोस् र यसलाई प्लसमा प्लग गर्नुभयो र समस्या बिना नै अपडेट गर्नुहोस्।
हेलो, मैले पनि अपडेट गरेको बखत समान भयो, यो ब्लक भयो र सेवा कम्पनीले यो लिने मँ भन्दा अधिक लिन्छु र मँ भन्छु कि उनीहरूले मात्र नयाँ सफ्टवेयर अपलोड गरेको छ, म यो सूचना खोल्छु र मेसेज पठाउँदिन। म भन्दा पहिले DOOOOOOOO मद्दत गर्नुहोस्।
Magaly लाई जवाफ दिनुहोस्
नमस्ते, यदि कसैले मलाई मद्दत गर्न सक्छ कि भनेर प्रश्न। मेरो आईफोन यसलाई अपडेट गर्न क्र्यास भयो र म यसलाई रिसेट गर्न सक्दिन! मैले पावर बटन भाँचेको छु। कसैलाई पनि यो रिसेट गर्न कुनै अन्य तरिका थाहा छ?
नमस्कार, मसँग आईफोन have छ र यो अपडेट गर्ने बित्तिकै स्थिर भयो र मेरो पावर बटन मैले गर्न सक्ने जस्तो काम गर्दैन?
नेल्भालाई जवाफ दिनुहोस्
एन्ड्रेस लान्डा भन्यो
म आशा गर्छु र मलाई सहयोग गर्न सक्छु। म मेरो क्यामेरा सक्रिय गर्छु र अगाडिबाट छवि देख्छु, म आफैंलाई हेर्न क्यामेरा सक्रिय गर्दछु र छवि हेराइन्छ र कालो र स्थिर रहन्छ, म पछाडि जान चाहन्छु र यसले केही पनि गर्दैन। मैले होम बटन थिच्नु पर्दछ र मेरो अनुप्रयोगहरूमा फर्कन, क्यामेरा छवि फिर्ता हुन्छ र यो कालो रहन्छ, अवरोध गरिएको छ र मैले होम बटन थिचेर आफ्ना अनुप्रयोगहरूमा फर्कनु पर्छ। अन्य अनुप्रयोगहरू प्रयोग गरे पछि वा क्यामेरा अर्को क्यामेरा अनुप्रयोगको प्रयोग गरेर, म प्रविष्ट गर्न सक्दछु, तर यसले मलाई प्रदान गरेको क्यामेरा प्रयोग गर्दैन। के मेरो समस्याको समाधान हुन सक्छ? मलाई मेरो आईफोन S एस मन पर्छ।
एन्ड्रिस ल्यानडालाई जवाफ दिनुहोस्
मसँग आईप्याड २ छ र यसले मलाई अपडेट गर्न दिदैन, यसले मलाई त्रुटि दिन्छ, के कसैले मलाई मद्दत गर्न सक्छ?
पज गरिएको अपडेटको बारेमा जानकारीको लागि तपाइँ सबैलाई धन्यवाद। ... आईप्याडको ईश्वरले मलाई उनीहरूलाई समग्र पठाउँनुभयो
Jefylaz लाई जवाफ दिनुहोस्
हेलो, तपाईले मलाई अर्को समाधान दिन चाहानुहुन्छ त्यहि समय मा बटनमा थिचोमिचो गरीरहेको थिएन तर मेरो लागि काम गर्नुहुन्न, म एउटा केबल पाइन्टिंग दिन्छु जसले मलाई आईटमहरू जडान गर्छ र सम्पर्क गर्नुहोस्। तब यी अपडेट्सहरू सुरूवात हुँदैन यदि यी अपडेटहरू एनआई मिरर्रआरआर P P पारित छन्।
प्रिय माया, तपाईले यो गलत गर्दै हुनुहुन्छ, किनकी तपाईको फोनले रिकभरी मोड प्रवेश गर्यो। दुबै बटनहरू १० सेकेन्डमा थिच्न फेरि प्रयास गर्नुहोस् जब सम्म यो पूर्ण रूपमा बन्द हुँदैन, एक पटक स्याउ आउँछ, तिनीहरूलाई छोड्नुहोस् र यस्तै भयो।
मेरो आईफोन update अपडेट क्र्यास भयो :(, म के गर्ने?
लिलीलाई जवाफ दिनुहोस्
जुआन म अपडेट लोड गर्दैछु र यो आधा भन्दा बढी हो !!!!! मेरो पावर बटनले काम गर्दैन! HELPAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
मेलालाई जवाफ दिनुहोस्
मारिया ग्राजिया भन्यो
मसँग एउटा आईफोन S एस छ, आईटियुन र युएसबी देखा पर्छ र म आफ्नो कम्प्युटरमा मोबाइल अपडेट गर्दछु तर मँ के गर्छु ब्रेकन / अफ बटन बटन मैले के गर्ने ???
मारिया ग्राजियालाई जवाफ दिनुहोस्
सिको इयान Hcnk भन्यो
म दसौं दोस्रो र केहि पनि गर्दिन र जब यसलाई ITunes मा कनेक्ट गर्न कोसिस गरिरहेको छु IT IT ITONES IN ITONE IN IT IT IT IT DATE IT IT, IT कृपया के नगर्नुहोस् ????
सिको इयान Hcnk लाई जवाफ दिनुहोस्
नमस्ते, मैले अपडेट गरे र यो बीचमा अडिग भयो। पावर बटनले काम गर्दैन, म के गर्न सक्छु ???
के छ लुइस! यही कुरा मेरो s सेकेन्डमा भयो र म त्यहाँ पर्खिरहेको थिएँ र यो लोडि finish समाप्त हुने प्रतीक्षा गर्दै थिए र मैले आफैंलाई यो सामान्य कुरा नभएसम्म, मैले यसलाई बन्द गर्ने कोशिस गरें, यसलाई पुन: सुरू गर्ने प्रयास गरें, र केही पनि नभएसम्म, जब सम्म एक साथी आयो र मलाई प्रेस थिचेन। घरबाट एकै समयमा बटन र लगभग seconds सेकेन्डको शटडाउन र यो पुनः सुरु हुन थाल्छ र जब तपाइँ यो समाप्त हुन्छ अपडेटको साथ तयार हुन्छ। हो यो मेरो लागि काम गर्‍यो। अभिवादन!
म एक आईफोन ss .4.१.२ लाई जेलब्रोकन गर्दछ तर यो पांगु र स्क्रिन पुन: स्वागतमा रहन्छ।
ब्याट्री सकिरहेको लागि कुर्दै काम गरीरहेछ ??? पावर बटनले काम गर्दैन ... ...
Dameli लाई जवाफ दिनुहोस्
तपाईं यसलाई समाधान गर्न सक्नुहुन्छ? तपाईंले यो कसरी गर्नुभयो? मैले अद्यावधिक गरेको बेला किन मलाई टिक गरियो र मसँग समान बटन टुट्यो!
Yesica लाई जवाफ दिनुहोस्
नमस्कार, कसैले मलाई कसरी siri कसरी सक्रिय गर्ने भनेर बताउँछन्, किनकि जब मँ सेटिंग्स> सामान्य राख्छु, siri देखा पर्दैन, म यो कसरी गर्ने?
Valeri लाई जवाफ दिनुहोस्
साथीहरू मैले आर सिम Y र सफ्टवेयर संस्करण LE.०. B द्वारा रिलीज गरिएको S एस पाउँदछन् म यो प्रश्न DATE.१.२ मा अपडेट गर्न चाहन्छु, मेरो प्रश्न रद्द गर्न छोडे बिना म यो अद्यावधिक गर्न सक्छु? FAS को लागी म तपाइँको टिप्पणीहरु को लागी
Fproaxaca लाई जवाफ दिनुहोस्
मसँग आईफोन s एस छ जुन अचानक यसमा ह्या up्ग भयो, मैले यसलाई पसलमा लगिदिएँ र तपाईं मलाई भन्नुहोस् कि उनीहरू त्यससँग जडान गर्न सक्दैनन्। कुनै सुझाव मलाई सहायता गर्न सक्दछ। मैले गरेको अन्तिम कुरा भनेको फेसबुक भिडियो हेर्न प्रयास गर्नु थियो। धन्यबाद
Rigo लाई जवाफ दिनुहोस्
मैले यसलाई अपडेट गर्न दिएँ र यो अडियो, मैले गर्नुपर्ने छ, कसैले मलाई मद्दत गर्न सक्छ
मसँग आईप्याड २ छ
शुभ - प्रभात ! मसँग आईओएस .4.१.२ अपडेट गरीएको छ र आईट्युन्ससँग जडान गर्न पठाउँछु, फोनले केहि गर्दैन जुन मलाई थाहा छैन मलाई के गर्नुपर्दछ .. मद्दत गर्नुहोस्
अलेक्जेन्ड्रालाई जवाफ दिनुहोस्
नमस्कार, मसँग आईप्याड २ छ र फ्रन्ट क्यामेरा लेबल गरिएको छ र पछाडि क्यामेराले काम गर्दैन। म के गर्न सक्छु??? धन्यबाद
पीडालाई जवाफ दिनुहोस्
मसँग आईफोन v v.4 सही जेलब्रेकको साथ छ .. र म संस्करण हेर्नको लागि प्रवेश गरें र यो घण्टा सम्म चार्ज रहन्छ र अपडेटका लागि हेर्ने लोड मात्र देखिन्छ कि केहि छैन .. किन यो छ? धन्यबाद
मसँग मेरो आईफोन c सी आईट्यूनबाट सबै चीज मेटाएर यसलाई पुनर्स्थापना गरिएको छ, र अब यो "आईफोनको लागि कुर्दै" भन्छ र मेरो आईफोनमा बारको साथ एक स्याउ तल देखा पर्छ, जुन मलाई थाहा छैन कि यो पूर्ण छ वा छैन तर, तर यो होईन। अन्तदेखि अन्त्यसम्मको रेखा हो ... मलाई कसले मद्दत गर्न सक्छ ?? म के गरौ?? म यो जस्तै छोड्छु ??? म अझै धेरै घण्टा कुर्छु ????? यससँग कम्तिमा दुई घण्टा लाग्छ ...।
Oscr लाई जवाफ दिनुहोस्
के तपाईले आफ्नो समस्या समाधान गर्नुभयो? मेरो आईफोन I को साथ मसँग समान समस्याहरू छन् र मलाई के गर्ने भनेर थाहा छैन: '(
आन्टोलाई जवाफ दिनुहोस्
म यसलाई अपडेट गर्न चाहान्छु र मैले युट्यूबसँग युट्युन्स राखें र यसलाई घर र हजारौं पटकमा लेख्ने प्रयास गरें .. अन्त्यमा यो महँगो सेलफोन क्र्याप हो, ग्यालक्सीसँग मलाई कुनै समस्या भएन
LEANDRO लाई जवाफ दिनुहोस्
मेरो आईफोन 7.1.2.१.२ मा अपडेट गरिएको थियो र यसले मलाई नयाँ अपडेट दिदैन, यसले भन्छ कि यो अपडेट भएको छ, म के गर्छु र .8.1.१ पहिले नै छ
Magdalena लाई जवाफ दिनुहोस्
म आईएसओ .8.1.१ अपडेट गर्न चाहान्छु र यसले मलाई आईट्यून्समा जडान गर्न आग्रह गर्दछ ... कुरा के हो भने मसँग पीसी छैन यसलाई जोड्न ... यो अनलक गर्ने कुनै तरिका छ। मैले पहिले नै लेख्ने कोशिश गरें र केही पनि भएन। ..
स्टेलालाई जवाफ दिनुहोस्
मिली माईल भन्यो
नमस्कार, म आइसो 8.1.१ स्थापना गर्दै थिए र सेल बन्द थियो। जब मैले यो सक्रिय गर्‍यो, यसले मलाई आईट्यून्समा जडान गर्न सोधे। म यसलाई जडान गर्दछु र आईट्यून्सले मलाई कारखानाबाट मेरो आईफोन रिसेट गर्न अनुरोध गर्दछ, म यो गर्छु र जब म charge% मा पूर्ण चार्जको अन्त्यमा पुग्दछु तब म एउटा ईरर सन्देश पाउँछु जुन स्थापना हुन सक्दैन, अब मेरो आईफोन बिना खोल्न असमर्थ भयो। सफ्टवेयर र म ITunes को लागी केहि गर्न सक्दिन, म के गर्ने?
मिली माइलीलाई जवाफ दिनुहोस्
तपाईको मतलब के हो, मेरो आईफोन 3G जीले मलाई पूर्ण मेमोरीको सन्देश दिए र यो आईट्यून्समा अडियो, म यसलाई केबलमा जडान गर्दछु र यो सँधै आइट्यून्स स्थितिमा हुन्छ।
शुभ दिउँसो प्रश्न? तिनीहरूले मेरो आईपो4लाई चिनो लगाए र म जवाफ दिन चाहन्न र मैले बटन थिच्नुहोस् कि कसरी ब्लक गर्ने माथि छ र यो बन्द भयो र यो सकृय छैन, म के गर्ने?
स्पोटिफाइले पहिले नै अफलाइन मोडमा संगीत खोज्न हामीलाई अनुमति दिन्छ
यस्तै प्रतिक्रिया are..6 र 5,5 इन्चको आईफोन m मकअपमा छन्